Aamuska Madaxda Puntland ee Qabsashada Somaliland ee Tukaraq Maxaa Loo Fasiran Karaa ? | SAHAN ONLINE
Aamuska Madaxda Puntland ee Qabsashada Somaliland ee Tukaraq Maxaa Loo Fasiran Karaa ?
Qabsashada Maamulka Hargeysa ee Tuulada Tukaraq 8 Jannaayo 2018, iyo aamuska maamulka Puntland maxaa isku beegay ?
Shirkii Amniga Qaranka Muqdisho lagu qabtay oo Madaxweyne Gaas ka qayb galay, maamulka dowladda Puntland muxuu faa’ido ka keenay shirkaas oo xatta aan ajendahaba lagu darin Weerarka S/Land ee Tukaraq iyo go’aanadii laga soo saaray midna ?
Abaaraha culus ee ku habsaday Gobollada Waqooyi Galbeed iyo Waqooyi Bari oo isku duruufo ah oo dhibaatooyin culus dad iyo duunyaba wada saameeyeen, sidee Muuse Biixi ugu fekeri karaa waqtigan inuu abaabul dagaal iyo weeraro kharash ku baxsho shacabku u baahan yahay ?
Shacabku se sidee u arkaan arrimahaas isu qaban waayey ?
Abaabulka Ciidan ee Maamulka Puntland iyo kharashka joogtada ah oo culayska ku ah dhaqaalaha dalka iyo Fal-celin la’aanta Ciidan oo aan muuqan maxaa loo fasiran karaa ?
Puntland oo 21 Weerar gardarro lagu soo qaaday oo aan marna laga guulaysan ilaa 1991, maxaa qorshaheedii is-difaaca bedelay hadda ?
Hubaynta Itoobiya ee Muuse Biixi oo ku dhiirigelisay inay dhufayso ka qotaan degaanka Tukaraq miyaanay macne siyaasadeed cabirayn??
Booqashada Madaxda S/Land ee Tukaraq ee sahanka ahayd January 2018 iyo qorshaha ay u yimaadeen, maxaa looga fal-celin waayay ??
Aamuska Xukuumada Puntland iyo Wakiilada Golaha Shacabku ma heshiis bay ku yihiin arrimo shacabka laga qarinayo ?
Shacabka Puntland oo kaalin xoog leh ka qaatay abaabulka difaaca Puntland, maxaa mugdi loo geliyay oo loo niyad jebinayaa ?
Siyaasada Puntland ee u muuqata mid ku jaha-wareersan dhinacaas iyo straatijiyada difaaca dalka iyo ballan qaadkii C/weli ee ololihii doorashadiisa 2013 (in aan Laascaanood Faataxo lagu qabsan) iyo Madaafiicda SNM oo madaxtooyada Garowe soo gaaraysa, waa arrin lagu jaha-wareersan yahay.
Maxaa ku dhiirri geliyay Muuse Biixi Doorashadiisi bil kaddib, iyo 28 sano kaddib burburkii Somalia, inuu Hawaysto si awood sheegashada ah inuu qabsado qaybo ka mid ah Gobollada Puntland oo la daawanayo ?
Haddii Ciidamadii Difaaca Puntland lagu wareejiyey Dowladda Federaalka, Federaalku ma daafacayaan Dowladnimada iyo Jiritaanka Puntland mise waa ku danaysanayaan keliya ?